Xiaomi Mi Lelee: Lookingchọ uru maka ego | Gam akporosis
Xiaomi Ọ na-alaghachi na tebụl nyocha anyị na ngwaahịa dị mma nke juru anyị anya site na ọnụ ahịa ya maka ego, nke bụrịrị njirimara nke ika ahụ oge ụfọdụ. Oge a ka anyị ga-ekwu maka "wearable", karịa otu kacha nke kachasị mara elekere sitere na ụlọ ọrụ Asia.
Chọpụta anyị Xiaomi Mi Watch, ihe eji mara igwe elele anya na ị na-akụ na oke ọnụahịa ruru oke. Echefula ozi niile anyị nwere maka gị na nyocha a na nso nso a, n'ezie ị chọghị ịhapụ ya.
1 Design: Ihe dị mfe karịa niile
3 Ngosipụta na ndụ batrị
4 Formanrụ ọrụ na ike
Design: Ihe dị mfe karịa niile
Dị ka ọ dị na mbụ, Xiaomi ahọrọla ngwaọrụ dị mfe dị ka ọkọlọtọ ya. Na nke a, anyị nwere smartwatch zuru oke na ihe gbasara 46 millimeters na mkpokọta. N'ezie, nhazi ahụ doro anya na ọ bara uru ịghara ịchọ igwe okwu ma ọ bụ oghere okwu, ebe ọ na-enweghị ha. N'elu ọnụ bụ ebe ọ nwere bọtịnụ abụọ, nke nwere maapụ arụ ọrụ. El Onye nke elu ga-arụ ọrụ dị ka onye na-agbanwe ma na-agbada ala ka ọ bụrụ naanị iji soro ngwa nlekota egwuregwu.
Ibu ibu: 32 grams
Akụkụ: 46 milimita
Dayameta eriri: 22 milimita
Ọkpụrụkpụ: 11,8 milimita
Mkpokọta ibu bụ 32 gram, ihe incredibly ìhè arọ. Na okirikiri nke okirikiri anyị ga-ahụ mkpụrụokwu "Home" na "Egwuregwu" nke ga-egosi arụmọrụ nke bọtịnụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Maka akụkụ dị ala anyị na-ahapụ ihe mmetụta nke obi obi na ihe mmetụta oxygen n'ọbara, ya mere ejiji n'oge ndị a. Elekere dị mfe na chassis ngwakọ dị n'etiti plastik na fiberglass nke nwere eriri silicone zuru ụwa ọnụ.
N'ihi oke nke "igbe" ọ nwere ike inye echiche dị iche, buru oke ibu maka ndị nwere nkwojiaka dị gịrịị, ọkachasị na ọkpụrụkpụ nke eriri ahụ.
Ngwaọrụ Xiaomi ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na-adọrọ mmasị na ọkwa ngwaike, Anyị ga-amalite na ihe mmetụta:
Accelerometer: Maka ijikwa nche na nyochaa ọrụ ahụ
Gyroscope: Maka ijikwa elekere na ụzọ egosi
Magnetik mmetụta: N'ihi na ezi na eke ojiji nke compass
Ihe mmetụta ọkụ gburugburu: Ijigide oke ezigbo ọkụ ọkụ
Mmetụta ikuku oxygen ọbara
Ewezuga ihe a niile, anyị ga-ejikọ Bluetooth 5.0 BLE maka njikọta mana anyị enweghị WiFi, nke a pụtara na njikọ ahụ ga-adabere kpamkpam na ekwentị mkpanaaka nke anyị jikọtara ya. Anyị enweela ọrụ na-enye afọ ojuju na Huawei P40 Pro na iPhone 12 Pro, anyị na-echeta na ọ dakọtara na gam akporo site na nsụgharị 4.4 na nke iOS maka mbipute 10 n'ihu. N'otu ụzọ ahụ, anyị nwere GPS na GLONASS n'adabereghị, na-emeziwanye arụmọrụ nke nsuso egwuregwu, ihe na-adọrọ mmasị na nche nke ụdị a. Na ọkwa teknụzụ, Xiaomi Mi Watch adịghị ka ihe na-enweghị ihe ọ bụla.
Ngosipụta na ndụ batrị
Na ihuenyo anyị mechara nwee nzọ dị ụtọ na panel OLED ubé curved gburugburu n'ọnụ, nke ahụ bụ 2.5D. Anyị nwere 1,39 sentimita asatọ na mkpokọta na a pụtara ngosi mkpebi ma ezu nke 454 * 454 pikselụ. Na ọkwa nchapụta nke ihuenyo, nke nwere ntọala ise site na ala ruo na nke kachasị elu, Anyị nwere uru nke ịnwe ihe mmetụta ọkụ gburugburu nke ga-achịkwa ike na akpaghị aka, ihe ọ na-eme nke ọma dịka nyocha anyị na nke ahụ ga-emekwa ka arụmọrụ nke nnwere onwe nke ngwaọrụ ahụ dịkwuo mma.
Elekere nwere ezigbo nzaghachi nzacha gafee osisi ahụ. Banyere obodo kwụụrụ onwe anyị, anyị ji akara siri ike sitere na Xiaomi laghachite, ekele maka 420 mAh na ụgwọ nke eriri ndọta ya (chaja etinyeghị) anyị na-enweta ihe dị ka ụbọchị 14 na mkpokọta, ihe na-erughị ụbọchị iri na isii nke akara ahụ kwere anyị nkwa na ndetu nkwado ya. GPS na-emetụta ojiji nke elekere na-adịghị mma, na-ahapụ anyị jiri ihe dị ka ụbọchị abụọ na mkpokọta, mana n'eziokwu, maka nsonaazụ ọ na-enye, ikekwe anaghị m ahụ ya dị oke mkpa ịme ya arụ ọrụ na-aga n'ihu. Ihe zuru ezu na-ewe anyị obere ihe karịrị otu elekere na ọkara ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka 0-100%.
Arụ ọrụ ahụ bụ nnọọ ìhè ekele ya Sistemụ arụmọrụ sistemụ, lekwasịrị anya karịsịa na ịhazi aha egwuregwu na egwuregwu, mana na-enweghị oke ngwa ọrụ. Ngwa mkpanaka ahụ dara ogbenye ma na-enye nhọrọ ole na ole ma a bịa n'ihe metụtara mmekọrịta, mana ọ na-enye anyị ọgụgụ nke ọdịnaya ahụ. Nke a na-elekwasị anya na ụdị egwuregwu 117 nke ọ gụnyere, kewara n'ime ngalaba ndị a:
N'aka nke ọzọ, nche anaghị emekọrịta na ọkwa, Anyi ekwuola ya na enweghi igwe okwu na igwe okwu. Anyị ga-elekwasị anya n'ịgụ ọkwa ndị a na-egosipụta nke ọma na n'ụzọ sara mbara. Ya mere, anyị nwere ezigbo elekere nwere oke njirimara zuru oke nke na-arụ ọrụ nke ọma na ọrụ ndị dị mkpa. Ebumnuche bụ igbochi ahụmịhe onye ọrụ anyị n'ihi na ngwa ahụ enweghị ọtụtụ ọmarịcha ikike. N'ihe a, anyị nwere elekere anya nke ọma lekwasịrị anya na ịnye anyị ọgụgụ ọkwa, nyocha ọrụ ahụ na egwuregwu na obere ihe ndị ọzọ. Ọnụahịa ahụ, agbanyeghị, kwekọrọ na ihe a niile.
Anyị anaghị echezọ na elekere ahụ na-eguzogide okpomọkụ sitere na -10ºC na 45ºC, ebe ọ bụ submịbilik ruo 5 ATM n'okpuru mmiri. Elekere ahụ na-egbu maramara, n'agbanyeghị ọrụ ya, anyị nwere arụmọrụ dị mma na ọrụ ya niile. The GPS mgbawa na-enye anyị a gbakwunyere nke nnwere onwe nke ngwaọrụ na obodo kwụụrụ bụ obi abụọ adịghị ya otu ike ebe.
Na akụkụ na-adịghị mma anyị nwere ngwanrọ mara mma yana ngwanrọ mmekọrịta, enwere ike ịnweta ngwa mkpanaka yana nke edoziri maka mgbaaka nsuso, na n'ikpeazụ, ọ bụghị akụkụ nke usoro ndụ nke Xiaomi, ma ọ bụ na opekata mpe ọ nweghị ebe a kapịrị ọnụ. Dịka uru, enwere ike ịchọta ngwaọrụ maka ihe na-erughị euro 120 n'ọtụtụ ebe ire ere dịka Amazon.
Ọ nwere GPS
Ọnụ ego siri ike
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi Lelee: Na-achọ uru maka ego
Etu esi ebufee ngwa na kaadị SD